Pterostilbene पाउडर Nootropics र एंटी-एजिंग पूरक शान्गके रसायनको रूपमा लाभ
1. Pterostilbene के हो?
Pterostilbene एक महत्त्वपूर्ण रसायन हो प्राकृतिक रूपमा केहि बोटबिरुवाको जीवन को दौरान संक्रमण को एक तरिका को रूप मा उत्पादन। यो कम्पाउन्ड रेशेराट्रोलको रूपमा चिनिने अन्य यौगिकसँग मिल्दोजुल्दो छ र पूरकको रूपमा सजिलैसँग उपलब्ध छ। Pterostilbene पूरक अत्यधिक जैवउपलब्ध छन्। यसको मतलव तिनीहरू सजिलै र चाँडो शरीरमा समाहित गर्न सकिन्छ र पाचन प्रक्रियामा गिराउँदैनन्। Pterostilbene पाउडर पनि कुशल छ, तर यसको आधा जीवन धेरै छोटो छ किनकि यो १०० मिनेट भन्दा कम छ।
Pterostilbene खाद्य स्रोतहरू
Pterostilbene खाद्य स्रोतहरुमा ब्लूबेरी, बदाम, क्रैनबेरी, mulberries, बदाम, रातो दाखमद्य, रातो अंगूर, अंगूर पात, भारतीय किनो रूखको बोक्रा, रातो चन्दन, र कोको शामिल छन्। ब्लूबेरीहरू यद्यपि उच्चतम टेरोस्टिलबेन फूड स्रोत हुन्, तर ब्लुबेरीहरू समावेश गर्ने रकम अझै पेरोस्टिलबेन पूरकहरूको तुलनामा थोरै छ। Pterostilbene ब्लूबेरी सामग्री ब्लूबेरी को हर ग्राम मा, लगभग to 99 देखि 52२ नानोग्राम को मानिन्छ।
2.कार्यको Pterostilbene संयन्त्र
कार्यको Pterostilbene संयन्त्र resveratrol भन्दा फरक छ। Pterostilbene यौगिक सबैभन्दा शक्तिशाली स्टिलबेन हो। बिभिन्न Pterostilbene पाउडर लाभ कार्य को एक फरक संयन्त्र संग संगत। ट्रान्स-टेरोस्टिलबेनको औषधीय क्रियामा एन्टिनोप्लास्टिक, एन्टिऑक्सिडन्ट, र एन्टी-इन्फ्लेमेટરી समावेश छ।
Pterostilbene प्रभावी antifungal गतिविधिहरू देखाउँदछ जुन रेवेराट्रोल भन्दा दस गुणा बढी शक्तिशाली हुन्छ। Pterostilbene यौगिक पनि antiviral प्रभाव देखाउँदछ। धेरै रोगजनकहरूबाट बोटबिरुवा संरक्षण Stterbenes को एक महत्वपूर्ण संयन्त्र जस्तो देखिन्छ, Pterostilbene सहित, र यी गतिविधिहरू जनावरहरू र मानिस मा पनि विस्तार।
Pterostilbene धेरै आणविक संयन्त्रहरू मार्फत एन्ट्यासेन्सर प्रभावहरू पनि देखाउँदछ। अनुसन्धान शो Pterostilbene कार्यहरू ट्यूमर सप्रेसर जीन, संकेत ट्रान्ज्याक्शन मार्गहरूको मोडुलन, oncogenes, सेल भेदभाव जीन, र सेल चक्र नियामक जीन समावेश गर्दछ।
Pterostilbene को antioxidative गुण resveratrol भन्दा धेरै फरक छन्। रेज्राभेट्रलमा, तीन हाइड्रॉक्सिल समूहहरूले आरओएस (प्रतिक्रियाशील अक्सिजन प्रजाति) लाई पृथक लिम्फोब्लास्ट र सम्पूर्ण रगतमा बेअसर गर्दछन् जबकि १ हायड्रॉक्सिल समूह र २ मेथोक्सी समूह भएको एक्स्टेरोसेल्युलर आरओएस घट्छ भने टेरोस्टिलबेन। एन्टिऑक्सिडेशन गुणहरूको स्थानीयकरणले एक्स्टेरसेल्युलर रिएक्टिभ अक्सिजन प्रजातिहरूलाई लक्षित गर्न Pterostilbene पाउडरको उपयोग सक्षम गर्दछ, जसले पुरानो सूजनको बेला टिश्यु क्षति गर्दछ।
तल कार्यमा थप pterostilbene संयन्त्रहरू छलफल गरिएको छ;
कार्यको Pterostilbene संयन्त्र; Sirtuin सक्रियता
Pterostilbene सेलुलर क्षति बिरूद्ध संरक्षण प्रदान गर्दछ कि कोशिका मा एक SIRT1 सिग्नलिंग मार्ग उत्तेजित गर्दछ, यसैले यसलाई सक्रिय बनाउँछ। यो मार्गले p53 अभिव्यक्तिलाई बढावा दिन्छ। पी 53aप्रोटीन हो जसले DNA लाई नोक्सानबाट बचाउँदछ र कोषहरूलाई म्युटेशनबाट बचाउँछ जसले क्यान्सर निम्त्याउन सक्छ।
SIRT1 ले तपाईंलाई क्षति र कोशिकाको क्षयबाट रोक्न सक्छ, जुन तपाईंको उमेर बढ्दै जाँदा अघि बढ्छ।
धेरै अध्ययनहरूले देखाए कि टेरोस्टिलबेन रासायनिक यौगिकले ज्वलन कम गर्दछ जुन टीएनएफ-अल्फा (ट्यूमर नेक्रोसिस कारक-अल्फा) द्वारा विनियमित हुन्छ। अक्सिडेटिभ तनावले सूजन ल्याउँछ; Pterostilbene interleukin-1b र TNF-alpha प्रतिक्रियाशील अक्सीजन प्रजाति घटाएर ब्लक गर्दछ।
यो कम्पाउन्डले ER (एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम) को रूपमा चिनिने सेलुलर मेसिनरीको केही अंश भित्र तनावबाट पनि बचाउँछ। एउटा अनुसन्धानमा, जब रक्तवाहिनिका कोषहरूको अस्तर को Pterostilbene पाउडरको संपर्कमा थियो, तिनीहरूको अस्तरले सूजन संकेतहरूमा प्रतिक्रिया देखाएन, र तिनीहरू सूजन देखा परेनन्।
कार्यको Pterostilbene संयन्त्र; विरोधी क्यान्सर प्रभाव
अचम्मको कुरा, रक्तवाहिनाहरूको अस्तरमा ईआर (एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम) तनाव कम गर्ने बावजुद, टेरोस्टिलबेनले घाँटीको क्यान्सर कोषहरूको एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा तनावलाई बढावा दिन्छ। यसैले, छनौटले क्यान्सरयुक्त कोषहरूलाई क्षति पुर्‍याउँछ र स्वस्थ कोशिकाहरूमा अक्सिडेटिभ तनावबाट बचाउँछ।
मेरुदण्ड वा मस्तिष्क कोषहरू (ग्लिओमा) क्यान्सर कक्षहरूमा, Pterostilbene Bcl-2 लाई कम गर्दछ र Bax लाई उठाउँदछ; यी परिवर्तनहरूले सेल "आत्महत्या" संकेतलाई बढावा दिन्छ किनकि मेरुदण्ड वा मस्तिष्क कोषहरू मर्दछ।
क्यान्सर कोशिकाहरूले नोच -१ को रूपमा चिनिने मार्ग प्रयोग गर्दछ, आफूलाई किसाथेरापी औषधीहरूको क्रियाबाट रोक्नको लागि, ओक्स्यालीप्लटिन र फ्लोरोरासिल। Pterostilbene खाल्ट १ सिग्नलिंग ट्यूमर केमोथेरापी मार्फत उपचार गर्न बढी संवेदनशील बनाउँछ।
Pterostilbene MUC1, बी-केटेनिन, Sox2, NF-κB, र CD133 सहित धेरै फोक्सोको क्यान्सर-बढावा यौगिकहरूको उत्पादन कम गर्दछ। यी प्रभावहरूले संयुक्तले सूजन कम गर्दछ र क्यान्सर कोषहरूको विकासको लागि यो लगभग असम्भव बनाउँछ।
Pterostilbene हिप्पोक्याम्पस क्षेत्र छनौट दिमागमा लक्षित गर्न सक्षम छ। यहाँ, यसले CREB (cAMP प्रतिक्रिया तत्त्व बाध्यकारी प्रोटीन), BDNF (मस्तिष्क-व्युत्पन्न न्यूरोट्रोफिक कारक), र MAPK (mitogen- सक्रिय प्रोटीन kinases) बढाउँछ,
तीन प्रोटीनले न्युरोनहरूलाई गुणा गर्न, बढाउन, र उनीहरूको वरपर प्रभावकारी रूपमा प्रभाव पार्न सहयोग गर्दछ। SNRI antidepressants पनि यी मार्गहरू लक्षित गर्दछ।
Pterostilbene हिप्पोकैम्पस मा Nrf2 नामक प्रोटीन को बृद्धि गर्दछ, जसले फलस्वरूप एन्टिऑक्सिडन्ट प्रोटीनको अभिव्यक्तिलाई बढावा दिन्छ।
Pterostilbene बीजा-एमाइलोइड (Aβ) बिरूद्ध दिमागलाई संरक्षण प्रदान गरेर शरीरलाई अल्जाइमर रोगको बिरूद्ध रोक्छ। यसले अक्ट र पीआई K के समावेश गर्दछ, दुई प्रोटीन जसले न्यूरन वृद्धि, मेमोरी र शिक्षालाई समर्थन गर्दछ।
3. Pterostilbene पाउडर लाभ
तल छलफल गरिएका तीन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छन् pterostilbene पाउडर लाभहरू
i. Pterostilbene रूपमा nootropics
हाम्रो उमेर बढ्दै जाँदा, विचारहरूको नयाँ ढाँचा गठन गर्न अझ चुनौतीपूर्ण हुन्छ, र यादहरू पहुँच गर्न बढी गाह्रो हुन्छ। सामान्य संज्ञानात्मक कार्यहरू सम्पन्न गर्न असमर्थता पनि कम हुन्छ। Pterostilbene पूरक जुनसुकै उमेर मा एक कायाकल्पित तंत्रिका वातावरण को निर्माण मा मद्दत गर्न सक्छ।
Pterostilbene एक शक्तिशाली nootropic हो, जो दिमाग आराम र अनुभूति बृद्धि गर्न सहयोग गर्दछ। यो पूर्व workouts को समयमा पनि लिन्छ किनभने यसको रक्त वाहिकाको vasodilation मा सहयोग गर्न को क्षमता को कारण। यसैले, अन्य नाइट्रिक अक्साइड बूस्टि ingredients सामग्रीहरूको जस्तै प्रभावहरू प्रदान गर्दछ।
Pterostilbene nootropic लाभहरू डोपामाइनको स्तर बढाउन यसको क्षमताको परिणामको रूपमा विश्वास गरिन्छ। कृन्तकहरुमा, Pterostilbene चिन्ता कम र मुड बढायो। वृद्ध कृन्तकहरू सहितको एक अनुसन्धानमा, टेरोस्टेलबेन सप्लीमेन्टहरूले डोपामाइन लेभल र वर्धित अनुभूति बढायो। साथै, जब Pterostilbene को मुसा दिमागको हिप्पोक्याम्पसमा उपलब्ध बनाइयो, तिनीहरूको काम गर्ने स्मृति बढ्यो।
अर्को अध्ययनमा मुसा सम्बन्धी पेरेस्टिलबेनले हिप्पोक्याम्पसमा नयाँ कोषहरूको बृद्धि पनि गर्‍यो। साथै, जवान चूहोंको दिमागबाट निकालेको स्टेम सेलहरू जब तिनीहरू Pterostilbene लाई सम्पर्कमा ल्याएमा द्रुत गतिमा बृद्धि भए।
सेल अध्ययनको अनुसार, pterostilbene पाउडर MAO-B (monoamine oxidase B) लाई रोक्छ र हाम्रो दिमागमा उपलब्ध डोपामाइनलाई बढावा दिन्छ। यो कार्य पार्किन्सन रोगको उपचार गर्ने ड्रग्ससँग मिल्दोजुल्दो छ, जस्तै रासाजेलिन, सफिनमाइड, र सेलेसिलिन। एक शोधमा, Pterostilbene एडी (Alzheimer रोग) संग सम्बन्धित क्षति विरुद्ध न्यूरोनहरु लाई रक्षा गर्दछ।
Pterostilbene चिन्ता नियन्त्रण क्षमता पनि monoamine अक्सिडेज बी रोक्न यसको क्षमता को एक परिणाम को रूप मा विश्वास गरीन्छ एक विशेष अध्ययन मा, Pterostilbene दुई र एक मिलीग्राम / किलोग्राम खुराक मा एनिसियोलाइटिक गतिविधि देखायो। यौगिकको एनिसियोलाइटिक गतिविधि ईजेएममा एक र दुई मिग्रा / किलोग्राम डायजेपामसँग मिल्दोजुल्दो थियो।
ii। Pterostilbene र मोटोपना
एक अध्ययनले मोटोपनालाई व्यवस्थित गर्नको लागि Pterostilbene को क्षमताको अनुसन्धानले देखाए कि pterostilbene पूरक र तौल प्रबन्धन बीच ठूलो सम्बन्ध छ। वैज्ञानिकहरूले विश्वास गरे कि लिटरोजेनेसिस कम हुने सम्भावनाको कारणले टेरोस्टिलबेन पाउडरमा फ्याट मास लेभललाई असर गर्ने क्षमता छ। लिपोजेनेसिस भनेको अतिरिक्त बोसो कोषहरू बनाउने प्रक्रिया हो। Pterostilbene पनि कलेजोमा फ्याट बर्न वा फ्याट अक्सिडेशन बढाउँछ।
उच्च कोलेस्ट्रॉल भएको मध्यम आयु वर्गका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा, कोलेस्ट्रोल ड्रग्स नखोज्ने सहभागीहरूको एउटा समूहले टेरोस्टिलबेन सप्लीमेन्ट लिने गर्दा केही वजन घटायो। यी नतीजाहरू अन्वेषकहरूको लागि आश्चर्यको रूपमा आएको कारण यो अनुसन्धान वजन घटाउने सहायताको रूपमा pterostilbene परिशिष्टको नापको उद्देश्य थिएन।
जनावर र कोशिका अध्ययनले यो पनि देखाउँदछ कि pterostilbene यौगिकले इन्सुलिन संवेदनशीलता बढाउन मद्दत गर्दछ। Pterostilbene के गर्छ यसले चिनीलाई फ्याटमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई रोक्दछ। यसले फ्याट सेलहरू बढ्न र गुणा गर्नबाट पनि बाधा दिन्छ।
Pterostilbene आंत मा पेट र वनस्पति संरचना परिवर्तन र खाना पचाउन सहयोग।
टेन्डोस्टिलबेनले खुवाएको कृषकहरूले अझ स्वस्थ पेटको वनस्पति र अकर्मेनसिया म्यूसिनिफिलामा ठूलो बढावा दिए। ए मुसिनिफिला एक ब्याक्टेरिया प्रजाति हो जुन कम ग्रेडको सूजन, मोटाई, र मधुमेह रोक्न देखिन्छ। यो जीवाणु हालसालै प्रोबियोटिक अनुसन्धानको एक मुख्य केन्द्र भएको छ।
iii। Pterostilbene दीर्घायु बढावा दिन्छ
Pterostilbene एन्टी एजिंग बेनिफिटहरू ट्रान्स-टेरोस्टिलबेन भनेर चिनिने बायोएक्टिभ रसायनसँग जोडिएका छन्। यो रासायनिक सूजन कम गर्न, संज्ञानात्मक गिरावट, र रगतमा चिनी स्थिर पार्ने प्रमाणित गरिएको छ। Vivo र in इन भिट्रो अध्ययनले Pterostilbene को रोकथाम गर्ने र उपचारात्मक प्रभावहरू समर्थन गर्दछ। यो रसायनले क्यालोरिक रोकावट मिमेटिकको रूपमा पनि कार्य गर्दछ, जसले शरीरलाई बायोकेमिकलहरू जारी गर्न उत्प्रेरित गर्छ, एडिपोनेक्टिनलगायत यसले उपचारलाई बढावा दिंदा बुढेसकालको प्रक्रिया सुस्त बनाउँछ।
यो बुढेसकाल विरोधी पूरक उमेरसँग सम्बन्धित रोगहरूबाट सुरक्षाको लागि परिचित छ, यसैले आयु बढाउँछ। कृन्तकहरूमा, यी रसायनहरूको कम खुराकहरू बुढेसकालसँग सम्बन्धित लक्षणहरू कम गर्दछ। अध्ययनले सुझाव दियो कि ब्लिरबेरी जस्ता प्रशस्त pterostilbene खाना स्रोतहरु पागलपन र क्यान्सर सहित बुढ्यौली, सम्बन्धित स्वास्थ्य चुनौति ढिलाइ हुन सक्छ।
4. Pterostilbene र resveratrol
त्यहाँ कुनै शंका छैन कि Pterostilbene र resveratrol नजिकको सम्बन्धित छ। रेसवेराट्रोललाई रेड वाइन र अpes्गुरमा बायोएक्टिभ रसायनको रूपमा व्यापक रूपमा चिनिन्छ।
रेवेराट्रॉलको स्वास्थ्य लाभहरू Pterostilbene जस्ता हुन्छन् र अल्जाइमर, एन्ट्यान्सर प्रभाव, उर्जा सहनशक्ति वृद्धि, विरोधी भड़काउने प्रभावहरू, मधुमेह विरोधी सम्भाव्यता, र हृदय लाभहरू बिरूद्ध संरक्षण समावेश गर्दछ।
Pterostilbene वास्तव मा रासायनिक resveratrol जस्तै समान छ, तर अध्ययन पहिले नै रिपोर्ट गरिएको छ कि Pterostilbene केहि स्वास्थ्य अवस्था को प्रबंधन मा resveratrol भन्दा बढी शक्तिशाली हुन सक्छ। Pterostilbene संज्ञानात्मक समारोह, हृदय स्वास्थ्य, र ग्लूकोज स्तर बृद्धि गर्न बढी क्षमता प्रदर्शन गरेको छ।
Pterostilbene आधा जीवन resveratrol को आधा जीवन भन्दा छोटो छ। Pterostilbene वास्तव मा चार पटक छिटो छ पाचन प्रणाली देखि शरिरमा अवशोषण गर्न को लागी resveratrol भन्दा। सैद्धान्तिक रूपमा, यसले Pterostilbene लाई पुनःभेटराल भन्दा धेरै पटक बढी प्रभावकारी बनाउँदछ। यद्यपि यसका बारे निश्चित गर्न अझ धेरै अध्ययनहरू गर्नु आवश्यक छ।
Pterostilbene र resveratrol कहिलेकाँही क्याप्सूलको रूपमा संयोजन पूरक प्रदान गर्न पनि संयोजन गरिन्छ। संयोजन पूरक अधिक शक्तिशाली हो किनकि यो दुई यौगिकहरूको फाइदा मिसाउँछ।
5. Pterostilbene पूरक
यसमा कुनै शंका छैन कि Pterostilbene का सबै भन्दा बढि लाभहरू प्राप्त गर्न, यसलाई सिफारिश गरिन्छ कि तपाइँ यसलाई पाउडर पूरकको रूपमा लिनुहोस्। Pterostilbene पूरक मल्टिपल प्राकृतिक-फूड स्टोरहरू र अनलाइन स्टोरहरूमा मार्केटिंग गरिन्छ जुन आहार पूरकहरूमा विशेषज्ञता राखिन्छ। तपाईं pterostilbene निर्माताहरू अनलाइन पनि फेला पार्न सक्नुहुनेछ।
Pterostilbene पूरक खुराक को एक विस्तृत विविधता संग अधिकतर क्याप्सूल फारम मा उपलब्ध छ। तपाईंले ध्यानपूर्वक लेबल वा लेबल पढ्नुपर्नेछ र यसलाई खरीद गर्नु अघि प्रत्येक क्याप्सुलमा Pterostilbene को नोट नोट गर्नु पर्छ। यो महत्त्वपूर्ण छ किनकि बिभिन्न खुराकले फरक प्रभाव देखाउन सक्छ।
साथै, केहि pterostilbene परिशिष्ट खुराक मानव मा अनुसन्धान गरिएको भन्दा बढी हुन सक्छ। सबै भन्दा सामान्य उपलव्ध खुराकहरू प्रत्येक क्याप्सूलमा mg० मिलीग्राम र १,००० मिलीग्राम बीचको हुन्छ।
माथि उल्लेख गरिएझैं संयोजन पूरकहरू पनि उपलब्ध छन्, सबैभन्दा लोकप्रिय संयोजन Pterostilbene र resveratrol को साथ। Pterostilbene पनि curcumin, हरियो चिया, Astragalus, र अन्य प्राकृतिक यौगिकहरु संग संयुक्त छ।
तपाईं सनब्लक क्रीमहरू पनि फेला पार्न सक्नुहुन्छ जुन Pterostilbene समावेश गर्दछ यद्यपि यो दुर्लभ छ। छालाको क्यान्सरको बिरूद्ध प्रभावकारी रूपमा तपाईलाई बचाउनको लागि आवश्यक पर्ने Pterostilbene को अध्ययन गरिएको छैन, तर यसले अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छ।
6. उच्च गुणस्तरको पिटरोस्टेलबेन पाउडर कहाँ पाउन?
यदि तपाईं बिक्रीको लागि उच्च-गुणको टेरोस्टिलबेन पाउडर खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं सही ठाउँमा हुनुहुन्छ। हामी चीन मा एक सबै भन्दा लोकप्रिय, जानकार, र अनुभवी टेरोस्टेलबेन निर्माता हो। हामी शुद्ध र राम्ररी प्याकेज गरिएका उत्पादनहरू प्रदान गर्दछौं जुन सधैं विश्व-स्तरीय तेस्रो-पक्ष प्रयोगशाला द्वारा शुद्धता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न परीक्षण गरिन्छ। हामी सँधै अमेरिका, युरोप, एशिया र विश्वका अन्य भागहरूमा अर्डर गर्दछौं। त्यसोभए यदि तपाई उच्चतम गुणस्तरको pterostilbene पाउडर किन्न चाहानुहुन्छ भने, हामीलाई मात्र सम्पर्क गर्नुहोस्।
रिमान्डो एएम, काल्ट डब्ल्यू, म्यागे जेबी, डेवे जे, बलिंग्टन जेआर (२००)) "Resveratrol, pterostilbene, र खोप बेरीमा piceatannol"। जे कृषि खाद्य रसायन। (२ (१)): – 2004१–-।
कपेटानोभिक आईएम, मुजिओ एम।, हुआang जेड, थम्पसन टीएन, म्याकोर्मिक डीएल फार्माकोकिनेटिक्स, मौखिक जैव उपलब्धता, र रेसेराट्रोलको मेटाबोलिक प्रोफाइल र यसको डाइमिथाइलथर एनालग, टेरोस्टिलबेन, मुसामा। चीमा। फार्माकोल। २०११;: 2011: – – –––०१।
सिंथेटिक ट्रान्सको सुरक्षा - नियमन (EC) No 258/97 to बमोजिम एक उपन्यास खानाको रूपमा रिसेराट्रोल। EFSA जर्नल। यूरोपीयन खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण, डाएटेटिक उत्पादनहरू, पोषण र एलर्जीहरूमा EFSA प्यानल। १ ((१): 14 1।
Becker L, Carré V, Poutaraud A, Merdinoglu D, Chaimbault P (२०१)) "रेल्वेराट्रोल, टेरोस्टिलबेन र ग्रेफाइभिन पातमा विनिफेरिनको एक साथ स्थानको लागि माल्डीआई मास स्पेक्ट्रोमेट्री इमेजिंग"। अणुहरू। २०१ (()): १०––––––००।
कार्यको 2.Pterostilbene संयन्त्र
P.Pterostilbene पाउडर लाभ
P.Pterostilbene र resveratrol
W. कहाँ सबैभन्दा उच्च गुण पिटरोस्टेलबेन पाउडर पाउन?